Nhau - Pinyang zvipfeko zvinogadzira inochinja-chinja yekugadzira musangano inosanganisa kuruka, kudhaya uye kusona
Mirairo yezvipfeko zviviri chete kana zvitatu inogona kugamuchirwa
Nekuda kwekupinda kweAlibaba "chipembere chechipembere", shanduko ine hungwaru yeindasitiri yekugadzira zvipfeko yave musoro unogwinha muindasitiri zvakare. Muchokwadi, sezvo fashoni yemarudzi ese zvipfeko zvemhando inowanzo kuve "yekukurumidza fashoni", hwave hunyanzvi hwakasarudzika kumafekitori ekugadzira zvipfeko kuona kuti vanogona kuhwina mumakwikwi anotyisa kusangana nezvigadzirwa zvemhando dzakasiyana siyana, diki batch uye mhinduro nekukurumidza.
Seyekare machira ebhizinesi ane nhoroondo yemakore gumi nemaviri, kutora mukana wese unopihwa nenguva ingano yemashiripiti yekutsungirira kubudirira. Kubva 2019, chirongwa ichi chakashandurwa, kubva pakucheka, kudhinda uye kudhaya kuenda pakushongedza uye kusona nehunyanzvi hwetekinoroji. Nhasi, nguva yekuendesa yePinyang maindasitiri akayera zviyero yakafambiswa kubva pamazuva makumi mana kusvika mazuva gumi nemashanu, uye odha yekudzosa yekuodha (odha nezvidimbu zvisingasviki 2000 zvidimbu) zvasimudzirwa kumazuva manomwe. Kutenda nemhinduro iyi inokurumidza.
Izvo zvidiki kurongeka, zvakanyanya kuipa. Uku ndiko kubvumirana kweindasitiri yezvokupfeka. Parizvino, mamwe maodara epamba anotoita zvidimbu zviviri kana zvitatu, uye kunongova nezvidimbu zana nemakumi masere nesere zveSUU imwe yemitambo yemhiri kwemakungwa, zvinova zvinonyanya kudikanwa batch diki, yakawanda batch uye nguva yekukurumidza yekuendesa. Makambani ekuteedzera mashandiro, mukupedzisira kuongorora kukwidziridza kukwikwidza, vamwe havagone kugamuchira mirairo yaunotora, uyu mukana. Izvi zvakare zvinobatsira mukusimudzira kwenguva refu kwemabhizinesi. "